Diyarad ayaa ku soo dhacday Buuralayda Dalka Angola | maakhir.com
Diyarad ayaa ku soo dhacday Buuralayda Dalka Angola
Luanda:- Diyaarad nooca yar yar ah ayaa ku dhacady meel buura u badan oo ku taala Dalka Angola, diyaaradaasi ayaa waxa si khaas ah u watay 11-Ruux kuwaasi oo la sheegay inay ahaayeen ku dal xiis ahaan Buurahaasi ugu kacitimay,waxa la cadeeyay inay diyaaradaasi soo dhacday xili ay ku jirtay Duulimaad hawada sare.
Wararka aanu ka helayno caasimada Dalka Angola ee Luanda ayaa waxay sheegayaan inay diyaaradaasi dhamaanteedba Bur Burtay ayna ku soo dul dhacday dhul Buura ah, dhamaan dadkii diyaaradaasi saarnaa oo lagu sheegay tiradooda 11-Ruux ayaa geeriyooday.
Af hayeen u hadlay ciidamadaasi Dalkaasi ayaa sheegay inay wali baadhayaan sababa ha dhabta ah ee keenay inay diyaaradaasi soo dhacado,isaga oo intaasi raaciyay inay jireen markii diyaaradaasi soo dhacday Dabaylo xoogaan iyo Roobab lixaadle oo Gobolkaasi aafeeyay.
Wali Booliska Dalka Agola ayaa waxay wadaan Baadhitaano xoogle iyaga oo isla markiiba gaadhay goobtii uu shilkaasi ka dhacay.
« Wafti ka socota UN-ka ayaa soo gaadhay Maamulka Puntland
Nuur Cadde oo la filayo inuu Saacad ka dib Muqdisho soo gaadho »